राउटे युवतीको भाईरल टिकटक भिडियो , को हुन् ति युबक जसले राउटे युवतीको भिडियो लिदै टिकटकमा हाल्ने ? – Classic Khabar
June 10, 2021 339
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोग साथै लोकप्रियताले कतिलाई मोडल बनायो त कतिलाई कलाकार । तिनै संजाल मध्ये टिकटक जो अहिले अत्याधिक रुचाइएको संजाल बनेको छ ।आफ्नो निखारिएको कलाहरु छोटो समयमा धेरै देखाउन सक्नु नै टिकटकको खुबि हो । त्यहि सामाजिक संजाल टिकटकमा अहिले सम्झना शाहि (राउटेनि) एकदमै भाइरल भैरहेकि छिन् ।
उमेरको हिसाबमा २० बर्ष लागेकि उनको गायन र बोलि अनि सुन्दरताको जो कोहि हामी फ्यान हौ । उनी उतिकै सालिन स्वभाविकि छिन् र उनको सोझोपनले झन उनलाई सबैको चासोको बिषय बनायो । पछिल्लो समय सम्झनासग टिकटक बनाउनेको जमात पनि सानो भने छैन् ।टिकटक बनाउने क्रममा नै यी युवकहरुले पनि उनिसग बनाएका मात्रै हुन् ।
साचै निन्दनिय र बिजोक अवस्थामा छन् राउटे समुदायहरु अझै पनि । नत निश्चित छर छ नत खानको नै टुङ्गो छ नत उनिहरुलाई ज्ञान र सिपका कुराहरु नै सिकाइन्छ ।उनिहरु पिछडिएको पिछडियै भए । आजको यश शृङ्खलामा तिनै सम्झना शाहिका टिकटक भिडियो पेश गर्दछौ । हेर्नुस् भिडियो
यो पनि हेर्नुहोस्,सफल जीवन कसको चाहाना हुदैन र ? त्यसका लागी हरेक मानिसले त्याग्नुहोस यी ५ बानी – सफल जिन्दगी’ भनेको के हो ? धेरै मान्छे सफल जीवन जिउनेबारे कुरा गर्छन्। तर, सफल जीवन भनेको के हो ? के यो भनेको सुविधामा बस्नु हो ? अध्ययनहरूले के बताउँछ भने सफल मानिसहरू नै बढी आत्महत्या गर्छन्। यदि सफलता पैसासँग मात्र जोडिन्छ भने धनी मान्छेले कहिल्यै आत्महत्या गर्ने थिएनन्। मान्छेहरू सफल हुन् कि हैनन् भनेर मापन गर्न यहाँ थुप्रै मापकहरू छन्। हरेक मान्छेका आ–आफ्नै बानी हुन्छन्। आ–आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ। केही बानीहरू राम्रा हुन्छन्, केही खराब हुन्छन्। सफल बन्न हामीले सिक्ने कुरामा कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। त्यस्तै केही बानीहरू त्याग्नुपर्छ।
१) अस्वस्थ जीवनशैली छाडिदिनुस् – स्वस्थ जिन्दगी चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपार्ईंले आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वस्थ जीवन बिताउन तपाईंले केही महत्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। शारीरिक कसरत नियमित गर्नुहोस्। नियमित अभ्यासले तपाईंको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ठीकमा राख्छ। स्वस्थ शरीरबिना सफल जीवनको कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। स्वस्थ भइएन भने तपाईंसँग जति पैसा भए पनि खुसी हुन सक्नुहुन्न। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन खानपिनको सन्दर्भमा केही अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययनअनुसार अमेरिकीहरू सामान्य पौष्टिक तत्वको बारेमा पनि ख्याल गर्दैनन्। पौष्टिक तत्वको बारेमा अनभिज्ञ नबन्नुहोस्। स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ।
२) हतार– अहिलेको पुस्ता हरेक कुरा छिटो चाहन्छ। उनीहरू सधैं हतारमा हुन्छन्। यस्तो बानीका कारण उनीहरू जे कुरालाई पनि छोटो समयमा राखेर विश्लेषण गर्छन्। धेरै मान्छेसँग लामो समयलाई लिएर बनाइएको लक्ष्य नै छैन। तपाईं सफल मानिसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि उनीहरू हरेक कुरालाई लामो दृष्टिबाट सोच्छन्। लामो समयको लक्ष्यबाट उनीहरू प्रेरित भइरहेका हुन्छन्। यदि तपाईं सफलतातिर उन्मुख हुनुहुन्छ भने छोटो समयमा परिणाम नखोज्नुहोस्।
३) क्षमा– मान्छेहरू आफ्नो असफलतामा अरूलाई दोष दिन्छन्। दोष लगाउने कोही मान्छे पाइएन भने उनीहरू भोग्यलाई दोष दिन्छन्। यदि तपाईं सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भने असफलतामा क्षमा दिन छाड्नुस्। अरू मान्छेलाई दोष दिन छोड्नुस्। भाग्यलाई सराप्न छोड्नुस्। तपाईंको क्रियाकलापको दोषी तपार्इं आफैं नै हो। जब तपाईं आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन सुरु गर्नुहुन्छ, तपार्इंले प्रगति गर्न थाल्नुहुन्छ। आफ्नो दोष देखेपछि मात्र तपाईं आफूलाई सुधार्न थाल्नुहुन्छ।
४) सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजन– सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टाटस’ पोस्ट गरेबापत वा टेलिभिजन हेरेबापत तपाईंलाई पैसा दिइन्छ ? यदि दिइँदैन भने किन त्यसैमा अड्किरहनु ? अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जाल लतजस्तै हो। र, सामाजिक सञ्जालको लतले अरू पनि लतहरूको विकास गर्न सक्छ। टीभी वा सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा बेखबर हुनुहोस् भन्ने मेरो धारणा होइन। मैले के भन्न खोजेको हो भने तपाईंले टीभी वा सोसल साइटमा घन्टौंदसमय खेर नफाल्नुस्। बरु यहाँ खर्च गर्ने समय अध्ययन वा ज्ञान बटुल्नमा खर्च गर्नुहोस्। तबमात्र तपाईं सफलताको दिशातिर उन्मुख बन्नुहुन्छ।
५) प्रभुत्व– एउटा मान्छेले संसारका सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्दैन। परिवर्तन गर्न थाल्नुभयो तपार्ईंलाई स्ट्रेस मात्र बढ्छ। आफूले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्ना व्यवहार पनि त्यहीअनुसार निर्माण गर्नुहोस्। आफ्नो वशमा नभएका चिजहरूमा हातै नहाल्नुहोस्। जे गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केन्द्रित हुनुहोस्। यसले तपाईंलाई स्ट्रेस घटाउन मद्दत गर्छ। स्ट्रेस घट्यो भने तपार्ई आनन्दपूर्वक बस्न सक्नुहुन्छ।
निष्कर्ष – सबै मान्छे सफल हुन चाहन्छन्। तर, केही थोरै मानिसमात्र सफल बन्छन्। यो किन हुन्छ भने केही मान्छे परिवर्तन हुनै चाहँदैनन्, केही मानिस परिवर्तनप्रति लचक हुन्छन्। जो आफ्नो इगोलाई पन्छाएर नयाँ कुरा सिक्नतिर लाग्छन्, उनीहरू सफल बन्छन्। सफल हुनु भनेको पैसा कमाउनु मात्र हैन। बरु आफ्नो जिन्दगीप्रति सन्तुष्ट हुनु हो।
Nextसविता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण : सबिताले बहिनि सँग यस्तो सम्म कुरा भनेकी रहिछिन (भिडियो सहित)